ရုရှားသမ္မတနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ ဆရာဝန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ရုရှားသမ္မတနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ ဆရာဝန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်
A picture taken on March 24, 2020 shows Russian President Vladimir Putin (R) shaking hands with the head of Moscow's new hospital treating coronavirus (COVID-19) patients Denis Protsenko during his visit to Kommunarka hospital in Moscow. - The head of Moscow's main coronavirus hospital who met with President Vladimir Putinaweek ago has tested positive to the COVID-19, he said on March 31, as the Kremlin announced the Russian leader's health was fine. Denis Protsenko met with the Russian leader who inspected the Kommunarka hospital while wearingabright yellow hazmat suit. But the 67-year-old Putin was also seen talking to Protsenko without any protective gear. (Photo by Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP)
ရုရှားသမ္မတနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ ဆရာဝန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်နဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပေမယ့် သမ္မတ ပူတင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ ရုရှားသမ္မတရုံးက ပြောပါတယ်။
သမ္မတ ပူတင်ဟာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က မော်စကိုမြို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေကို ကုသပေးနေတဲ့ ဆေးရုံကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ပူတင်ဟာ အကာအကွယ်ဝတ်စုံ မဝတ်ဆင်မီ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရတာ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိရတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ အခုအခါ သီးခြားခွဲပြီး နေထိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ ပူတင်ကတော့ ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူ ၂၄ ဦး ရှိနေပါတယ်။
သမ္မတ ပူတင်ဟာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က မော်စကိုမြို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေကို ကုသပေးနေတဲ့ ဆေးရုံကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ပူတင်ဟာ အကာအကွယ်ဝတ်စုံ မဝတ်ဆင်မီ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရတာ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိရတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ အခုအခါ သီးခြားခွဲပြီး နေထိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ ပူတင်ကတော့ ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူ ၂၄ ဦး ရှိနေပါတယ်။
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခန့်မှန်း လူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပြန်၊ ၅၄ သန်းကျော် ရှိ
Next articleလွယ်ဂျယ်ဂိတ် အမှတ် (၂) မှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကို ဝင်ရောက်မှု ယာယီပိတ်